Tsy nanana firaisana ara-nofo noho ny 10 taona - News Fitsipika
Tsy nanana firaisana ara-nofo noho ny 10 taona
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Tsy nanana firaisana ara-nofo noho ny 10 taona” dia nosoratan'i Pamela Stephenson Connolly, ho an'ny The Guardian tamin'ny Alatsinainy 21 Desambra 2015 08.00 UTC
Aho 46 taona, vehivavy izay tsy nanana firaisana ara-nofo noho ny 10 taona. Izany mihitsy ny drafitra, nefa aho niraikitra tao mandrakizay faribolana: I manahy be momba ny fomba hahafahako manazava amin ny mety ho mpiara-miasa sy ny intsony Mitohy, ny ratsy dia mahazo. Tsy te ho velona ny sisa ny fiainako tsy misy firaisana ara-nofo sy ny fitiavana.
Ny hoe vonona ara-teorika ny hampifandray firaisana ara-nofo amin'ny olona iray hafa dia tsara dingana voalohany. Dia tsy maintsy haka risika, anefa, ary tsy misy na iza na iza kely fiarovana ho an'i tsy natoky tena sy ny embarrassments, na dia niaina firaisana ara-nofo mba ho. Raha ny tena izy, rehefa misokatra ny fandavana - na dia maneso - dia ampahany manan-danja ny asa miandry. Rehefa mitranga mahazo aina, fotsiny milaza ny tenanao miaina sy handefitra izany.
Amin'izao fotoana izao, miezaka ny mifantoka amin'ny fanaovana fifandraisana amin'ny hafa fotsiny ho an'ny voly sy ny finamanana. Raha mamela ny tenanao ho tonga bebe kokoa natao hana-namana, ela na ho haingana, dia ho azy ianao hihaona olona izay ho mahasarika. Tamin'izay fotoana izay, dia tena tsy maintsy miala ny fampiononana ara-potoana ary aoka ny fanirianao hitarika ny lalana.
Antoka mba ho tsara fanahy kokoa ny vatana manomboka izao, ka mitampisaka amin'ny fiheverana fa mendrika ny mankasitraka. Olombelona tsirairay dia mety ho tsara tarehy hafa. Ary aza manahy momba ny mety ho mpiara-miasa 'ratsy fomba fijery momba ny maharitra manambady: tsy voatery hilaza azy, fa na dia manao, maro ny olona no mieritreritra fotsiny ianao fitsipika.
• Pamela Stephenson Connolly dia US-monina mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny firaisana ara-nofo manokana aretina.
• Raha te toro-hevitra avy amin'ny Pamela Stephenson Connolly amin'ny firaisana ara-nofo raharaha, mandefa antsika fohy famaritana ny olana ho private.lives@theguardian.com (masìna ianareo, aza mandefa Attachments). isan-kerinandro, Pamela mifidy olana iray mba hamaly, izay ho nivoaka an-tserasera sy ny atao pirinty. Malahelo izy fa tsy mahazo miditra Taratasin'olona manokana.
← Tianao ve Pee ao amin'ny ba kiraro handidy ny Phone? Lehibe mpitondra tsy manao izany rehetra izany amin'ny ny →